Wasiirka Amniga Puntland oo Laamaha Amniga Gobolka Mudug kala hadlay xoojinta Amniga Gaalkacyo – Radio Daljir
Seteembar 1, 2015 5:06 b 0
Talaado, September 01, 2015 (Daljir) — Shirkan looga hadlayey amaanka guud ee gobolka Mudug ayaa waxa uu ka dhacay Xafiiska Mamulka Gubolka waxaana ka soo qeyb galay laamaha amniga qeybahooda kale duwan.
Dood ay yeesheen wasiirka amniga Dowladda Puntland iyo masuuliyiinta ammaanka heer gobolayaa ugu danbeynti waxaa ka soo baxay saddex qodob oo kale ah:
In la tayeeyo ciidamada nabadgelyada ee gobalka.
In la adkeeyo nabadgelyada guud ee gobalka, lana xaqiijiyo amniga magalada Gaalkacyo.
In saldhigyada ciidanka ammaanka la balaariyo.
In la xoojiyo wadashaqaynta madaxda nabadgelyada ee Gobalka.
Wasiirka Amniga Puntland, Cabdi Xirsi Qarjab ayaa laamaha ammaanka ee Gobalka ugu baaqay inay dadaal dheeri ah muujiyaan, isla markasna ay yeesheen todobaadkiiba hal mar kulan looga wada hadlayo xaalada gobalka iyo halka uu marayo ammaanka Gobalka, waxa uu sidoo kale Qarjab sheegay inay ka go’an tahay adkaynta magalooyinka Puntland iyo dajinta qorshaha nabadgalyada lagu adkaynayo.
Al-shabaab oo Bur-burisay Buundo Caan oo ku taalay Deegaanka Janaale